Iiraan oo Kordhisay Howlgalkeeda La Dagaalanka Burcad Badeeda Soomaalida wax ay ku sheegtey
Taliyaha guud ee ciidamada Badda Dalka Iran oo Isniintii la hadlaye warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay in hoos udhac uu ku yimid weeraradii khatarta ku ahaa maraakiibtooda isticmaala biyaha ka baxsan soomaaliya iyo waliba kuwa ka akdhaw xeebaha.
Admiral Xabiibullaah Siyaari ayaa yiri “Hada ma jiraan khataro sidaa u badan oo laga muujinayo kooxaha burcad badeeda Soomaalida, taasine waxa ay ku timid in howlgalkeena la dagaalanka kooxahaasi oo aynu kordhinay”.
Waa uu sii hadlay Admiral Xabiibullaah Siyaari waxa uuna yiri “Burcad badeeda waxa ay ka kooban yihiin kudlado fara badan oo isku xiran iskulana shaqeeyo sida ciidamadeena oo kale, sidaa awgeed waxaa adag in guud ahaan lasoo afjaro balse xalka ugu dhaw ayaa ah in laga hor istaago weerarada ay qaadayaan”.
Taliyaha guud ee ciidamada badda Iran ayaa mar la weydiiyey su’aal ah in dowladda Iran ay tahay dowlad ugu badan ee ay muwaadiniintooda iyo maraakiibtoodaba ay gacanta ku dhigaan kooxaha burcad badeeda ayaa ugu jawaabay.
“Kahor inta aysan Kacaanta islaamiga ah ku biirin howlgalka lagula dagaalamayo kooxaha burcadda waxa ay lahaayeen awood muuqata balse maanta aysan laheyn dar-dartii ay ku socdeen kooxaha burcad badeeda muddo dhan 10-sano kahor” ayuu yiri Admiral Xabiibullaah Siyaari taliyaha Ciidamada Badda Iran.
Ugu dambeyn taliyaha ayaa sheegay in kooxahaani ay khatar ka geysan jireen waqooyiga Gacanta cadmeed, Badweynta Hindiya iyo waliba xeebaha dalka Cuman oo ay kasoo afduuban jireen kooxaha burcad badeeda maraakiibta ganacsi taasine ay sababtay in qiimo koror uu ku yimaado maciishada lasoo mariyo badda maadaama khatar loo bareerayo.
Kooxaha burcad Badeeda Soomaaliya ayaa afduub u geysta maraakiibta iyo Doomaha isticmaala biyaha caalamiga ah ee ka baxsan Soomaaliya iyo waliba kuwa xeebaha Soomaaliya.
Kooxaha burcadda ayaa ku dooda in ay maraakiibta iyo doomaha ay afduubtaan ay xaalufin u geystaan Xeebaha Soomaaliya si lamid ahne ay sun ugu soo daadiyaan xeebaha Soomaaliya.
Maraakiibta, Doomaha iyo badmaaxiyiinta ugu badan ee u gacan gala kooxaha burcad badeeda ayaa u badan dalalka Iran iyo Bangaldesh.